ကြိုးမဲ့စွန်၏ ရင်ဖွင့်သံစဉ်များ: March 2008
ဖြစ်ပါ့မလားညီလေး... စိုးရိမ်မကင်းတဲ့လေသံနဲ့ စီနီယာဖြစ်တဲ့ ကိုတိုးကြီးကမေးလာပါတယ် ကျွန်တော်ကလည်း အေးဆေးအစ်ကိုကြီးစိတ်ချ ... ပါလို့.. ဒီတောဒီတောင်ထဲလမ်းမရှိ ဘာမရှိကို အရင်တစ်ခေါက်က မြေပုံ၊သံလိုက် အိမ်မြောင်၊GPS (ကိုယ့်ဟာတော့ဟုတ်ပါဘူး) တွေကိုင်လို့ တိုးထားဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံအရ ဒီတစ်ကြိမ်တော့ အေးဆေးတိုးမယ်ဆိုပြီး စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပြီးသားလေ။တပ်မဌာနချုပ်ကလည်း အပေါင်းနီလာ(+2)မှာ ဗျူဟာနဲ့ အရောက်ပြန်ပေါင်းပါလို့ ဆိုလာတာကိုး။
ဂျူနီယာအကျဆုံးတပ်ခွဲမှူး အတွေ့ကြုံလည်း ရစေချင်လို့ စစ်ကြောင်း-၂ မှူးက မင်းတပ်ခွဲနဲ့ ပွိုင့် တိုးဖို့ပြောလာပါတယ်။ မနက်ဖြန် သင်္ကြန်အကြိုနေ့ ၊အကျနေ့ မူသဲ(ရွာ)ဗျူဟာစခန်းကို အရောက်တိုးမယ်....သင်္ကြန်အကျနေ့မှာ လူသူရှိတဲ့နေရာကိုအရောက် အဖွဲ့တွေလူသူလေးပါးရှိတဲ့နေရာမှာ အတာ သင်္ကြန်ဆိုတာလေး နွှဲကိုနွှဲ စေရမယ်..လို့ အားခဲထားလိုက်ပါတယ်။
သင်္ကြန်လက်ဆေးမိုးကဖွဲဖွဲစကျပါတယ်...နင်းရတဲ့မြေသားနဲနဲတော့နူးညံ့သွားတော့ ခြေထောက်သက်သာတယ် အချင်းချင်းပြောလာကြတယ်..မိုးလေးက မနက်ဖြန် ပိတောက်ပွင့်အောင်ဖြန်းပေးတာ...ဆိုပဲ..ဆရာကြီးတစ်ဦး နောက်တာထပ်ကြားရပါတယ် အေးနော် သေချာလည်းကြည့် သတိလေးလည်းထားကြဦး ပိတောက်ပွင့်မှာက နောက်မှ မင်းတို့အတွက် မိုင်းပွင့်နေဦးမယ်...တဲ့..အင်းဟုတ်တော့လည်းဟုတ်သား..ဝါးပိုးဝါး သစ်ပင်ကြီးတွေ ထူထပ်နေတဲ့ကရင်တောထဲမှာ ပိတောက်တော့မတွေ့ပါဘူး သစ်ခွတွေအရောင်အသွေးမျိုးစုံ ပုံစံအရွယ်အစား အဆန်းအပြားတွေမျိုးစုံနဲ့ လှတာတော့တော်တော်ကိုလှပါတယ်။အချိန်ကန့်သက်ချက်တာမရှိခဲ့ရင် ကျွန်တော် တပည့်တွေကိုတက်ခူးခိုင်းမိမှာပါ။သစ်ခွ အရိုင်းတွေအယဉ်တွေမသိပါဘူး လှပြီးအရောင်သွေး စုံတာကတော့ မြင်တွေ့ဘူးသမျှထဲမှာ တီဗွီထဲမှာထက် ဒီတစ်ခါအလှဆုံးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
သွားနေရင်းနဲ့ပွိုင့်ကခနတန့်ပြီး လက်ဆင့်ကမ်းပြောလာပါတယ် ရှေ့ညာဘက်က ကြက်တွန်သံ ကလေးငိုသံ ကြားနေရတယ် ဗိုလ်ကြီး ဆက်တိုးရမလား..တဲ့..ဗိုလ်မှူးမှာတာနားထဲမှာ ပြန်ကြားယောင်လာပါတယ်..လူနေတဲ အစုတွေ ရွာလို့ထင်ရတဲ့နေရာကိုရအောင်ရှောင်ကြ။ ဝင်တာနဲ့ဖြစ်မှာ ကိုယ်လူတွေလည်းထိမှာ သူတို့လည်းနာမှာ သေနက်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူး မိုင်းပဲရမှာ ကိုယ်အကျိုးမရှိ အထိနာ သူတို့လည်းဖွာ မှာ... သင်္ကြန်တွင်းဘာ အကုသိုလ်မှ မပွားချင်ဘူးကွာ အေး...ထိပ်တိုက်တွေ့ရင်တော့ လက်မနှေးစေနဲ့ မင်းလူထိပြီဆိုတာနဲ့ ....ဒါကို ကြည့်ထား...တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ် ဘယ်ကိုစောင်းတိုး ဘာသံမှ မထွက်စေနဲ့ ...လို့ မိုးနံ့မြေသင်းနဲ့က သင်းနေပါတယ် တောထဲတောင်ထဲရောက်နေစေကာမူ သင်္ကြန်ရဲ့ အရိပ်အငွေ့တွေကိုတော့ ထိတွေ့ခံစား နေရပါတယ်။စိတ်ကူးအတွေးကို အတင်းစုစည်းနေတဲ့ကြားက သင်္ကြန်သီချင်းတွေကို ကြားနေသလိုခံစားနေကြ ရပါတယ်။ တောင်ယာဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တောင်ကုန်းလျှိုစောင်း ဝါးတောအောက်ကမှာသွားနေရတာ ဖြစ်လို့ ခြေချော်ပြီး လျှောမဆင်းအောင်သိထားနေရပါတယ်... မိုးရေစိုထားတဲ့မြေသားက နင်းလို့မမြဲပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ညနေ(၅)နာရီကျော်လောက်မှာ ကုန်းနေရာကောင်းတစ်ခုကိုရွေးပြီးညအိပ် နားဖို့ပြင်ပါ ဆိုတာနဲ့ ဝန်းကျင် လွှမ်းမိုးမှုကင်းလွတ်တဲ့ကုန်းတစ်ခုမှာပတ်နေရာ ယူလိုက် ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ဗိုလ်မှူးစိုင်းကတော့ အမြဲတူညီ နေတတ်တဲ့အကျင့်အရ ရေအရင်ဆုံးရအောင် ပြေးချိုးပါတယ်။ပြီးတာနဲ့ တစ်နေ့တာမှတ်စုလေးရေး။အိပ်ယာခင်း သေချာပြင်ပြီး ရေဒီယို လေးကိုဖွင့်လို့ ကမ္ဘာကြီးနဲ့အဆက်သွယ်စယူပါတယ်။တပည့်ကျော်ကရေချိုးပြီးပြီးချင်း သောက်ဖို့ ရေနွေးကြမ်းကိုရေဘူးအန် နဲ့ထည့်ယူလာပေးပါတယ်။ည(၈)နာရီကျော်မှာ သဇင်(ပြင်ဦးလွင် အသံ) က သင်္ကြန်သီချင်းလေးတွေစကြားရတာနဲ့ချက်ချင်းဆိုသလို စိတ်ကနောက်တန်းမြေကိုရောက်သွားပါတယ်။(ကောင်မလေးတွေမပါဘူးနော်..အတွေးမှာ..)အခုချိန်ဆို ၅၉ လမ်းပေါ်ကမဏ္ဍပ်တွေကဆိုင်ကယ်တွေကိုရေ မထိတထိနဲ့ လှမ်းပတ် နေလောက်ပြီ....၇၃ လမ်းအတိုင်းမိန်းရှေ့ကိုဆိုင်ကယ်စီးသွားရင် လမ်းမှာဆိုင်ကယ်ချင်း ကပ်ရှောင်တာနဲ့ရေသန့်ဘူးနဲ့ရေပတ်နေကြပြီ....ဟူး..ဝူး...
ဒိုင်း ဒိုင်း...ကိုယ့်ဆီကသေနက်သံ ခွဲ(၃)နေရာကထွက်လာတာပါ...ခနကြာတော့စကားသံတွေ ကြားရတယ်။ အားလုံးကိုယ့်ရှေ့ပတ်လည်ကိုသေချာကြည့်ထားကြ.တဲ့.. အင်..မြင်မှ မမြင်ရတာ.. တောတိုးသံနားထောင်ရမှာ ပေါ့လေ..လူလာကပ်တာတဲ့၊ နောက်တော့ အဝေးကနေ ဖန်း ဖန်း ဆိုပြီးကာဘိုင်သံကြားရတယ်..ငပွေးဆီကပါ တုံ တုံ... ဟာဆော်ပဟ 40mm(ခေါက်ချိုးသေနက်)နဲ့လှမ်းထုလာပါတယ်..သူလည်းထုံးစံအတိုင်းပါပဲ။ အဝေး ကိုကျော်ကျ ပါတယ်...ဂျိမ်း ဆိုပြီး တစ်ချက်ပဲကွဲပါတယ်။ဆက်သားကလိုက်ပြောပါတယ် ဘယ်သူမှမအိပ်ပါနဲ့ ကိုယ့်ရှေ့လှုပ်ရှားမှုတွေ့တာနဲ့ပစ်..စစ်ကြောင်းမှူးကမှာပါတယ်..မနက် ၅ နာရီအသင့် ခွဲ(၁)ကပွိုင့်ထွက်မယ်.. ဆိုလာတာနဲ့ အဲဒီညက မအိပ်ရဘဲမိုးလင်းခဲ့ရပါတယ် သင်္ကြန် feeling လေးကိုပြန်ခေါ်တာကိုမရတော့ပါဘူး သူလည်းသေနက်သံကြောင့် လန့်ပြေးပြီထင်ပါ့.... အကြိုနေ့က ဒီလိုကြိုဆိုခဲ့တာပါ....
နောက်နေ့မနက်(၅)နာရီခွဲစထွက်တော့ စမ်းတဝါးဝါးနဲ့ တဘုန်းဘုန်းချော်လဲတာကြားနေရ ပါတယ် ကိုယ်လည်း လဲတာပဲ..အောက်ကိုကောင်းကောင်းမှ မမြင်ရတာလေ.. လင်းတော့လည်း ဘာတိမ်မှမရှိ ပူလိုက်တဲ့နေ ဒီနေ့ ပင်မလမ်းမကြီးပေါ်ကို နေ့ခင်း (၁)နာရီခွဲကျော်လောက်စတင်ခြေချမိတော့မှပဲ စိတ်အေးကြတော့တယ်.. ထမင်းစားနားမယ်...တဲ့ ..အေး ဒီအသံကြားချင်နေတာ..ဆရာ သူလည်းဆာနေမှာပဲ.. ကျွန်တော်တို့ စစ်သား တော်တော်များများ အစာအိမ်ဝေဒနာခံစားကြရတာ မဆန်းတော့ ဘူးလေ ..တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဗိုက်က ဆာချိန်မတူပေမယ့် သွားနေ့တဲ့အချိန် နားရင်တောင် ထမင်းစားမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ကို အကြီးဆုံးဆီက မရမချင်း စားလို့မှ မရတာလေ...မောင်ကြီးတို့ကတော့ ရေချောင်းကြည်ကြည်လေးတွေ့ရင်ရေကိုပဲ အဝသောက် မျက်နှာရေဆွတ် အဆာဖြေလို့တင်းခဲ့တာ...လမ်းမပေါ်မြေသားမာတော့လည်း ခြေထောက်တွေကကျိန်းစပ်နေပါတယ်။
မူသဲရွာကိုစဝင်တယ်။ကလေးနဲ့အမေတွေ၊သက်ကြီးရွယ်အိုတွေပဲရှိကြပါတယ်... ဗျူဟာမှူးဆီတက်ပြီးသတင်းပို့ တာနဲ့ ဒီနေ့တော့နားကြပေါ့ကွာ..မနက်ဖြန်ကနေ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ထိ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ စတုဒီသာတစ်ဝ ကျွေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်။ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မှာတော့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို ဒို့မြန်မာဓလေ့အတိုင်း ကုသိုလ်ပြု ရေချိုးခေါင်းလျှော်ပေါ့ကွာ၊ရွာထဲကိုဆင်းရင်သေနက်လုံးဝမယူပါနဲ့ သူတို့ဆီကိုလည်း သေချာပြောထားတယ် ယူမလာကြဖို့၊ ထောက်ပို့ဆွယ်က ဆရာကြီးနဲ့ဆက်လုပ်ကြပေါ့ ငါပြောထားပြီးသား..ကဲ ဘာသတင်းပို့စရာရှိလဲ မရှိရင်နားကြတော့...ဆိုတာနဲ့ ပြန်ဆင်းလာကြတယ်။ နားထဲမှာတော့ နည်းဗျူဟာမှူး မှာတာလေးတစ်ခုစွဲကျန် နေပါတယ်...
အေး သင်္ကြန်ဆိုတာကတော့ လူတိုင်းခံစားကြရတာပါပဲကွာ...ပျော်တာမပျော်တာက လူအပေါ်ပဲ မူတည်တယ်။ကိုယ်ပျော်ရွင်ကျေနပ်ရင် အဲဒီသင်္ကြန်ကလည်းပျော်စရာ သင်္ကြန်ပဲ၊နေရာဒေသက အဓိကမဟုတ် ပါဘူးကွာ...ဒို့ဆရာသမားတွေမှာသလိုပေါ့ ..နေတတ်ရင်တော့ကျေနပ်စရာပေါ့ကွာ......တဲ့
Posted by နေလွမ်းသူ at 8:13 PM0comments
သင်္ကြန်နီးလာတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပုသိမ်ကြီးသားတွေလည်း မန္တလေးသားတွေနည်းတူ ဆိုင်ကယ်တွေကိုပြင်ကြ ချယ်သကြပါတော့တယ်။ ပြင်ဆင်မှုစရိတ်ကတော့ မကုန်ဘူးလေ။ ဆရာကြီး ယာဉ်ပြင်(တပ်မတော်ယာဉ်ပြင် တပ်ကြပ်ကြီး) ကို နဲနဲပါးပါးစစ်ခိုင်းလိုက်တာနဲ့ ပြီးပါတယ်။ တစ်ချို့ကြလည်း သိပ်တော့နားမလည်ပါဘူး ကားနဲ့ ဆိုင်ကယ် တူမှ မတူတာကိုး။ ကျုံးအရှေ့ခြမ်း ၅၉ လမ်း တောင်ဖက်အခြမ်း ၂၆ ဘီလမ်းတို့ကနေဆိုင်ကယ်ဖြတ် စီးတိုင်း ရေပက် မဏ္ဋပ်တွေဆောက်လုပ်ခြယ်သပြင်ဆင်နေကြတာကိုတွေ့မြင်ရလေ သင်္ကြန်ပိုးလို့ ခေါ်ကြတဲ့ ဘယ်လိုခံစားချက်မှန်းမသိတဲ့ ရွစိရွစိစိတ်ကတဖွားဖွားပေါ်လာတတ်ပါတယ်။
ဒါကိုက ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ့ အတာသင်္ကြန်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဝိသေသတစ်ခုပါ။ မနှစ်က သင်္ကြန် တုန်းက ဗထူး တပ်စုမှူးသင်တန်း(PC)တန်းခွဲ ၃ခုလုံး Outdoor သင်ခန်းစာဆိုပြီးတောထဲ ထည့်ထား ခံခဲ့ရတာလေ။ ဟာဟ ဒီနှစ်တော့မောင်ကြီးတို့ လက်က အသင် ဘယ်ပြေးမလဲ ရွှေမန်းသင်္ကြန်ရယ်... တပ်မှာလဲ စစ်ကိုင်းကိုသွားပြီး ယိမ်းအက ဒိုးပတ်အက တွေပြိုင်ဖို့ အတွက်လေ့ကျင့်နေကြပါတယ်။ တပ်ရင်းမှူး။သူ့ဇနီးနဲ့အရာရှိအိမ်ထောင်သည်များ သူတို့ အမျိုးသ္မီးများပါ ဦးစီး ကြပ်မတ်နေကြပါတယ်။ ကြားထဲကလွတ်နေတာက နန္ဒအောင်ဦးစီးဝေလေလေ ရိပ်သာကအဖွဲ့များပါ။ သိတဲ့ အတိုင်းပဲ။ ညနေဆိုဘောလုံးကန်။
ညစာစားပြီးတာနဲ့ အောင်တော်မူနားကCafeBlue တို့ မိန်းရှေ့ကFriends O2 တို့မှာရောက်နေတတ်ကြတာလေ(ရုံးအလုပ်မရှိရင်ပေါ့)။ ဒီလိုနဲ့သင်္ကြန်က ၅ ရက်ပဲ လိုတော့တယ်. ..ပိတောက်တစ်ချို့လည်းပွင့်နေကြပြီလေ။ အဲဒီနေ့က မန္တလေး လမ်း ၃၀ က Leo မှာတပ်ကရုံးစာတစ်ချို့ကို ကွန်ပျူတာစီ ပရင့်ထုတ်ဖို့ လုပ်နေတုန်း ဆိုင်ကဖုန်းကို တပ်ရေးဗိုလ်ကြီးက အခုချက်ချင်းတပ်ပြန်လာခဲ့ပါတဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ကျွန်တော်က နောက်ဖြစ်အောင်နောက်လိုက်ပါသေးတယ် ဘာလဲအစ်ကိုကြီး အမေရိကန် ကလာ တိုက်နေပြီလား ... လို့ ... ဆိုင်ကယ်ကို ပုံမှန်ထက်အနည်းငယ်အရှိန်မြှင့်လို့ပြန်လာခဲ့ တော့တယ် တပ်ကိုစဝင် ဘောလုံးကွင်းထဲမှာ တပ်မတော် Faw ကားကြီး ၆ စီးစီလို့ထိုးထားတာကိုလှမ်းမြင်တွေ့နေရကတည်းကသိလိုက် ပါပြီ... မှတပါးအခြားမရှိ.... လုံခြုံရေး ထွက်ရပါလိမ့်မယ်.....လို့ အရာရှိတွေ အရာခံဆရာကြီးတွေပါ အစည်း အဝေးခန်းမထဲမှာ အင်အားညှိနှိုင်းလိုအပ်တာတွေ တပ်ရင်းမှူးကမှာနေပြီလေ နန္ဒအောင်က ထုံစံအတိုင်း Junior အကျဆုံးတပ်ခွဲမှူးဖြစ်တာနဲ့အညီ ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိ IO ပါလုပ်ရပါဦးမယ် ဒီတော့ အင်အားအတိ အကျမလာခင်ကတည်းက စစ်ကြောင်း တပ်ခွဲ ခွဲ ဆက်သွယ်ရေးစက် 4051,Icom တွေပါဖြန့်ခွဲစာရင်းလုပ်ရပြီ ။ မမှားပါဘူး ကျွန်တော်တို့ တပ်စစ်ကြောင်း(၁)တပ်ရင်းမှူးဦးစီး တပ်ခွဲ (၂)ခွဲက မန္တလေး ဆီဒိုးနား ဟိုတယ်ကို ဗဟိုပြုလို့ Asean သင်္ကြန်မဏ္ဋပ် လုံခြုံရေးပါ... စစ်ကြောင်း(၂)ဒုရင်းမှူးနဲ့တပ်ခွဲ(၂)ခွဲက တောင်ခြေနဲ့ ကျုံးကြီးရဲ့ မြောက်ဖက်အခြမ်းလုံခြုံရေး...ပါ...တဲ့... ညစာစားပြီးတာနဲ့ သတ်မှတ်နေရာတွေကိုစထွက်ခဲ့ကြရတာပါ။
အီကို တို့လူပျိုအရာရှိတွေ ပွဲစပျက်ပါတယ် ထမင်းစားဖို့ ပန်းကန်ခွက်ယောက် အဝတ်စားသေတ္တာပြင်ဆင်ထည့်ပေး မယ့်သူမရှိ။အိပ်ယာကိုဖြစ်သလိုဆွဲသိမ်း ထိုးထည့်။ဆိုင်ကယ်တွေကို အဘမသိအောင် လာပို့ပေးဖို့တပ်မှာကျန်ခဲ့ မယ်သူကိုမှာရ... လစ်တာနဲ့ ခိုးလည်မလို့လေ... အိုး သင်္ကြန် ၅ ရက်(၂၀၀၄)တာပြီးသွားတယ် သူများတွေ ပျော် ကခုန်ကြ ရေတွေစိုရွှဲ ယူနီဖောင်းကို မချွတ်လိုက်ရပါဘူး.... ရန်ဖြစ်ပြီးခေါင်းကွဲ မူးပြီးလဲတဲ့သူတွေကိုတာ ခေါ်ယူ ဆေးခန်းလိုက်ပို့ပေးလို့ ရေစိုခဲ့ရတာ 26 B လမ်းပေါ်က Alpine စတိတ်စင်ပေါ်မှာ No,တို့ Yes တို့ 59 Rd ပေါ် Premier မှာ ဖြူဖြူကျော်သိန်း တွေ ဇော်ဝင်းထွဋ်တွေ ကြားပဲကြားလိုက်ရတာပါ သူများပြောလို့ ။..Asean state စင်ကိုမိုင်းကွဲရင် တစ်ခါတည်းထွက်တာပြေးဖို့ပြင်ပါ. တဲ့..အဘက အားပေးတာလေ... လူကြီးတွေ ရေကစားချိန် အတွင်းစည်းမှာ ကျွန်တော် အရပ်ဝတ်နဲ့ အနီးကပ်လုံခြုံရေးလုပ်ပါမယ်ဆိုတာကို အဘက ရတယ် ယူနီဖောင်းနဲ့ ပဲအတွင်းရောအပြင်စောင်ခြုံပါ..တဲ့.. ဘယ်လိုမှကို အကြံက မအောင်မြင်ဘူးလေ ကိုယ်နဲ့ရွယ်တူ ငယ်လူမဟူ ရေတွေစိုရွှဲကဲလိုက်သဲလိုက်ကြတာ သီချင်းတွေကြားပြီး ကိုယ်ခန္ဒာအောက်ပိုင်းကရွပိုးထိုးနေတာယူနီဖောင်းက ကချင်စိတ်ကို ချုပ်ထားလို့နော်...ညကျတော့ ပုဆိုးနဲ့ စတစ်ဝတ်ပြီး မြို့တော်စည်ပင်ရှေ့က ဗဟိုလ်မဏ္ဋပ်မှာ အရိပ်ယောင်ပြရမယ်ဆိုပဲ.... ဒို့တစ်တွေမြူးမယ် ဒီသင်္ကြန်ပွဲ.... ဟာ ပိုက်လေးစုတ်တယ်ကွာ တဲ့ သီချင်းက စိတ်ထဲကလိုက်ဆိုနေမိတယ် ဟာ.. သေနက်လေး ရှုပ်တယ်ကွာ..လို့ ခါးက ကျည်ဆန်ထည့်မထားတဲ့ လက်စွဲ9mm Pistol လေးကိုလက်ကစမ်းပြီး....
မြင်တာမြင် မကြင်ရ ဆိုတာဒါကိုပြောတာလား အမေရဲ့....လို့ ၊ အားခဲပြီး လည်မယ်လို့ ကြံရွယ်ပြီးခါမှ ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီး သူများတွေပျော်နေကြတာကို ရပ်ပြီးကြည့်နေရတဲ့ဘဝ၊ အဆိုးဆုံးကတော့ မူးပြီးရန်ဖြစ်တဲ့သူတွေပါပဲ၊ အမြင်မတော်တော့လည်းခေါ်ပြီးဆေးထည့်ပေး အရမ်းဆိုးနေရင် ဆေးရုံကိုပို့ပေးလိုက်ရပါသေးတယ်၊ နောက်တန်းတပ်မှာ ကျန်ခဲ့ တပ်ခွဲ လစာကြပ်က ဆိုင်ကယ်ကို အဘမသိအောင် လာပို့ပေးတယ်လေ.... အင်း ဆရာမြင့်သိန်း ကတော့ မှာထားတဲ့အတိုင်း လာပို့ပေးတာ ဒီမှာက မတ်တပ်မေ့ ငုတ်တုတ်မေ့ နေရပြီ၊ အဘမသိအောင်ခိုးလည်ပေါ့ ဗိုလ်ကြီးရ..တဲ့.. ဟ ဆရာ့အဖေက Icom နဲ့ သတိရတိုင်း ခေါ်နေတာလေ.. တစ်ခါတစ်လေ ..အေး ဒီဘက်ကိုခနလောက်လျှောက်ခဲ့ပါဦးဆိုတာက ရှိသေး .. အဲဒီအခါ ကျုပ်ကရှိမနေရင် ကွိမှာလေ.. တပ်မှာ အစည်းဝေးမှာ ကျွန်တော့်ကိုပါ မိတ္တူပေးတာမကြား ဘူးလား၊ အေးနော်လုံခြုံရေးနေရာကနေ ငါလာစစ်လို့မရှိလို့ ခိုးလည်တဲ့ကောင်တော့ ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် အချုပ်ထဲ ထည့်မှာ... ဆိုတာက အဲဒါ ကျွန်တော်ပါ ပါတယ်လေ...လို့.... သင်္ကြန်ရက်တွေအတွင်း တပည့်တွေကတော့ ကောင်းပါတယ် လည်ချင်တဲ့သူတွေ အထူးသဖြင့်လူပျိုတွေကို တစ်လှည့်စီ အရပ်ဝတ်လဲပြီး လည်ခွင့်ပေးတာ လောက်ကတော့ အဘမသိအောင်လုပ်ပေးလိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်... နန္ဒအောင်တို့ကတော့ သူများပျော်လို့မပျော်နိုင် ရည်းစားပျောက်လို့ မှိုင်... ဆိုတာထက်ကို ဆိုးခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပါ။ ကျွန်တော့်ဆက်သွယ်ရေးသမား ဒုတပ်ကြပ် သန်းထွန်း မကြာခန ပြောတာကြားနေရပါတယ်.. တောထဲတောင်ထဲရောက်နေလို့ ဘာမှ မမြင်ရမကြားရရင် ထားပါတော့ ခံသာပါသေးတယ် ဗေဒါကမာ ရာ အခုတော့ ကိုယ့်ရှေ့မှာတင် သင်္ကြန်ထုပ်ကြီးက ပြုတ်ကျ နေတာ....တဲ့...... အေးပေါ့ကွာ မကောက်ဘဲ ကျော်တာ သွားလိုက်ပေါ့ ....လို့ ပြန်ပြောဖြစ်လိုက်ပါတယ်။
Posted by နေလွမ်းသူ at 7:08 PM 1 comments